‘म जलेबीजस्तो फाइल घुमाउन्नँ’– दिगम्बर झा - संवाद - नेपाल
सरकारविरुद्ध अदालत जानुभएको थियो । मुद्दा फिर्ता गरेर पुन:नियुक्ति पाउनुभयो । के यो ‘म्याच फिक्सिङ’ थियो ?
सरकारले दिगम्भर झालाई होइन, ०७४ भदौ १४ पछिका नियुक्ति एकमुष्ट बदर गर्दा म पनि परेँ । दूरसञ्चारमा काम सफल गर्नु छ भने सरकारको सहयोग र समर्थन हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारको चाहना छैन भने म जबर्जस्ती बस्दिनँ भनेर मुद्दा फिर्ता लिएको थिएँ । पछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट पुन: नियुक्त भएँ ।
मन्त्रीसँग कुरा मिलाएर मुद्दा फिर्ता लिनुभएको हो ?
होइन । मैले मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कसैलाई भेटेको छैन । पदमुक्त हुनुअघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको थिएँ । उहाँको डिजिटल नेपालको सपना मलाई मन परेको छ । मैले नक्सा लगेर कामहरू अवगत गराएँ । उहाँ मसँग प्रभावित हुनुभयो ।
६४ वर्षको उमेरमा दोहोरिई–दोहोरिई किन अध्यक्ष हुनुभएको ?
यो विज्ञको पद हो । खुबी देखाउने पद हो । त्यसैले काम देखाउन आएको छु । ऐनमा मेरो उमेरलाई बन्देज गरेको छैन । नियुक्ति हुँदाका बखत ६५ वर्ष नाघेको हुनुहुँदैन भनेको छ ।
तपाईं जहाँ पनि फिट देखिनुहुन्छ । त्यस्तो के क्षमता छ ?
म राजनीतिक मान्छे होइन । एउटा व्यावसायिक मान्छे हुँ, जो काममा विश्वास गर्छ । मेरो काम गर्ने आफ्नै शैली र निर्णय गर्ने क्षमता छ । म जलेबीजस्तो फाइल घुमाउन्नँ । सीधा निर्णय गर्छु । बितेको १० वर्षमा व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउने नागरिकउड्डयन प्राधिकरणमा सुगतरत्न कंसाकार, म, सचिव अर्जुन कार्की र कुलमान घिसिङबाहेक को देखियो त ?
दूरसञ्चारमा तपार्इंका कार्ययोजना के–के छन् ?
दुई वर्षभित्र नेपालका हरेक नागरिकलाई इन्टरनेटको पहुँच हुनेछ । फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरेर एउटा मल्टिनेसनल कम्पनी ल्याउँछु । पाँच वर्षभित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गराउँछौँ । सूचनाको सुपर हाइवे बन्नेछ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीको डिजिटल नेपालको सपना पूरा हुनेछ ।